ဇိမ်ခံအခြားအဆင့်မှပုဂ္ဂလိကဂျက်လေယာဉ်အားဖြင့်ယူတတ်၏. ထို့အပြင်, ဒါကြောင့်ထိရောက်မှုနှင့်အရှိန်အဟုန်တစ်ခုလတ်ဆတ်တဲ့အဓိပ်ပာယျကိုထောက်ပံ့ပေး. တစ်နှစ်လယ်ပိုင်းအရွယ်အစားပုဂ္ဂလိကဂျက်လေယာဉ်ငှားရမ်းထောက်ခံမှုရှိခြင်း, you'll achieve your location quicker. ဤရွေ့ကားလေယာဉ်အများဆုံးလေကြောင်းလိုင်းများထက်မြန်ခရီးသွားလာ. တစ်ဦးဦးဆောင်အရှိန်အဟုန်အတွက်တချို့ကရွက် 982 km / h. Mix this using the proven fact that private-jet journey saves you from the bureaucracies of main airports and also lengthy protection inspections and you'll get prime performance and comfort https://georgia.gov/
အတ္တလန်တာခုနှစ်တွင်ပုဂ္ဂလိကဂျက်ပဋိညာဉ်စာတမ်းပျံသန်းမှုဝန်ဆောင်မှု, GA 404-662-4200
ပုဂ္ဂလိကဂျက်ပဋိညာဉ်စာတမ်းပျံသန်းမှုကိုလံဘတ်, ဂျော်ဂျီယာ 404-662-4200
ပုဂ္ဂလိကဂျက်ပဋိညာဉ်စာတမ်းပျံသန်းမှုသြဂတ်, ဂျော်ဂျီယာ 404-662-4200
ဖလော်ရီဒါပြည်နယ်, တက္ကဆက်ပြည်နယ်, နီဗားဒါး, နယူးယောက်, အီလီနွိုက်